भक्तपुरले कसरी बढायो निषेधाज्ञामा रगतको संकलन ? - आजकोNepal
भक्तपुरले कसरी बढायो निषेधाज्ञामा रगतको संकलन ?
संवाददाता २२ भाद्र २०७७, 4:26 am
लकडाउन या निषेधाज्ञानमा रगत संकलन कार्यलाई कसरी चुस्त बनाउने भन्नेमा नमुना बनेको छ भक्तपुर रेडक्रस सोसाइटी । सोसाइटीका सभापति मनोजकुमार थापाका अनुसार जिल्ला शाखामा मात्रै अहिले १००० युनिटको हाराहारीमा रगत मौज्दात छ ।
एक साताअघिसम्म रगतको अभाव रहेको भक्तपुरले कसरी रक्तसंकलन कार्यलाई चुस्त बनायो त ? शाखाका सभापति थापा भन्छन् ‘हामीसँग विभिन्न संघसंस्थाको समेत गरेर झण्डै साढे ४ सय जनाको नामावली छ, जो नियमित रक्तदान गर्नेगर्छन् । उनीहरूमध्ये ठाउँ अनुसार एउटै ठाउँका रक्तदाताहरूलाई फोन गरेर उनीहरूकै टोलमा गएर रक्तदान गर्ने गरिएको छ । अहिले पनि दैनिक २ ठाउँमा रक्तदान गर्ने गरिएको सोसाइटीले जनाएको छ ।
थापाका अनुसार रक्तदान गर्ने ठाउँमा ६ फिटको दुरीमा रक्तदाताहरूलाई लाइनमा राखिन्छ । त्यसमध्ये रक्तदान गर्ने ठाउँमा प्रत्येक ५ जनाले एकैपटकमा रक्तदान गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको हुन्छ । रक्तदान कार्यमा खटिएका रेडक्रसका प्रतिनिधिहरूलाई पीपीईको व्यवस्था गरिएको हुन्छ भने रक्तदान गर्न आउन चाहनेलाई यातायातको समस्या भएमा उनीहरूलाई रेडक्रसको जिल्ला शाखाको गाडीले समेत ल्याउने लैजाने गर्ने गरेको थापाले बताए । उनले देशभरका शाखाले यसरी सुरक्षित ढंगले रगत संकलन गर्न सक्ने सुझाव समेत दिए ।
उनका अनुसार शुक्रबारदेखि भक्तपुर शाखाले कोरोना संक्रमण भएर मुक्त भएकाहरूको रगत संकलन गरेर प्लाज्माथेरापीको लागि प्लाज्मा संकलन समेत सुरु गरेको बताएका छन् । अब आफ्नो रक्तसमूहको प्लाज्मा आवश्यक परेको खण्डमा समेत भक्तपुर रेडक्रस सोसाइटीमा सम्पर्क गर्न सकिने थापाले बताए ।